श्रीमती बिहान अबेरसम्म सुतेपछि श्रीमानले उठाए आश्चर्यजनक कदम, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी। हर घरमा श्रीमान श्रीमतीबीच झगडा हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ झगडा यतिसम्म बढ्छन् कि सम्बन्धविच्छेदको अवस्था आउँछ । तर सम्बनधविच्छेदको कारण के होला ? भारतको मुम्बइमा निकै विचित्र कारण देखाउँदै सम्बन्धविच्छेदको निवेदन आएको छ ।
मुद्दा खारेज गर्दै अदालतले यी कारणले अत्याचार नदेखाउने फैसला गरेको छ । यसअघि ती व्यक्तिले पारिवारिक अदालतमा पनि निवेदन दिएका थिए जहाँ यो मुद्दा खारेज भएको थियो । त्यसपछि उनी हाइकोर्ट पुगेका थिए । तर, हाइकोर्टले पनि उनको निवेदन खारेज गरिदियो ।